Isaziso sokushintshwa kohlaka lwenhlangano yenkampani
Isikhathi Iposi: 09-20-2020
Makhasimende Athandekayo: Ibhizinisi lethu liyakhula ngenxa yentuthuko eqhubekayo kule minyaka. Kusukela ngoSepthemba 2020, sisungula inkampani entsha ebizwa ngeJiangsu TISCO Industrial Co, Ltd iJiangsu Joyina i-Industrial Co, Ltd manje iyigatsha leJiangsu TISCO Industrial Co, Ltd. Sicela wazi ukuthi. Funda kabanzi »
UHLUKO PHAKATHI KWAMA-304 NO-316 STEEL OKUNGASETSHENZISWA
Lapho ukhetha insimbi engagqwali okumele ikhuthazelele izindawo ezonakalisayo, izinsimbi ezingenantambo ze-austenitic zivame ukusetshenziswa. Njengoba sinemikhiqizo emihle kakhulu, amanani aphezulu we-nickel ne-chromium kuma-austenitic steels angenasici nawo ahlinzeka ngokumelana nokugqwala okuvelele. Ngokwengeziwe, ...Funda kabanzi »